रेडियो नाटक श्रृंखला 'मै सरी सुनाखरी' | Hamro Patro
स्यालकोटकी जुनीमायालार्इ शुकमानकाे साथी प्नशान्तले शुकमान जस्ताे माया गर्ने मान्छेलार्इ नगुमाउँन सचेत बनाउँदैथिए । उता बगरपुरकी समिक्षाले एकपटक उपाशनासँग भेटेेर सम्बन्ध सुधार्नका लागि प्रभातलार्इ सल्लाह दिएकी थिइन् । यता मध्यनगरमा त्रिलोचनकै कारण अाफू फसेकाे कुरा थाहा पाएकी उपाशनालार्इ उनै त्रिलाेचनले माफी माग्नुकाे सट्टा कसैले अाफ्नाे केही बिगार्न नसक्ने चेतावनी दिएकाथिए ।
मैं सरी सुनाखरीको ४५ अाैं श्रृंखला सुन्नकालागि यहाँ थिच्नुहोस्
नाटकको कथा तथा पात्रहरुको बारेमा केहि जिज्ञासा छन् भने मै सरी सुनाखरीको फेसबुक पेज https://www.facebook.com/maisarisunakhari/ मा गर्इ तपार्इ अाफ्ना कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ अथवा एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको टोल फ्रि नम्बर १६६००१३४५६७ मा फोन गरि आफ्नो कुरा रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ ।
► ४५ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः स्यालकोटकी जुनीमायालार्इ शुकमानकाे साथी प्नशान्तले शुकमान जस्ताे माया गर्ने मान्छेलार्इ नगुमाउँन सचेत बनाउँदैथिए । उता बगरपुरकी समिक्षाले एकपटक उपाशनासँग भेटेेर सम्बन्ध सुधार्नका लागि प्रभातलार्इ सल्लाह दिएकी थिइन् ।
► ४४ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः बगरपुरमा रश्मीको घरमा मन्दिर बनाउँने तयारी हुँदैथियाे । तर मन्दिर बनाउँने सम्पूर्ण जिम्मा लिएका माइलादाइ भने एकाएक घर हिँडेका थिए । उता लडेर घाइते भएका डाँडागाउँका हेम्बेकाे उपचार खर्च कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा रामप्यारी निकै चिन्तित थिइन् । यता स्यालकोटमा अाफूसँग मरिहत्य गर्ने शुकमानले शान्तीलार्इ भगाएकाे कुरा सुनेपछि जुनीमायाकाे हाेसहवास नै उडेकाे थियाे ।
► ४३ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः अार्थिक उपार्जनका लागि सहर जाने निर्णयमा पुगेका डाँडागाउँका हेम्बे गाउँकै खानेपानीकाे पाइप लाइन मर्मत गर्ने क्रममा चिप्लेर लेडेका थिए । उता मध्यनगरकाे स्वस्तिका कर्पाेरशनकी कर्मचारी समिताले हाकिम भेटवालबाट पी ए बन्रे प्रस्ताव अाएकाे खुसी साट्दै गर्दा उपाशनाले उक्त पदका लागि हस्ताक्षर नगर्न सुझाव दिएकी थिइन् । यता बगरपुरमा पैसाकाे अभावकाे कारण मन्दिर बनाउने काम राेकिएकाेथियाे ।
► ४२ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः घरमा बिरामी श्रीमतीदेखि निरास भएका भेटवाललार्इ उनकै सहकर्मी साथी त्रिलाेचनले अफिसकै कर्मचारी समितालार्इ पी ए काे रूपमा नियुक्ती गर्न सुझाएका थिए । उता जुनीमायाले बेवास्ता गरेकाे रीसमा शुकमानले अाफ्नाे माेबाइलबाट जुनीमायाकाे फाेटाे हटाइदिएका थिए । यता अामाकाे बचन र उपाशनाकाे हाैसला पाएपछि डाँडागाउँका हेम्बे गर्भवती श्रीमती रामप्यारीलार्इ छाेडेर मध्यनगर जाने निर्णयमा पुगेका थिए ।
► ४१ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः स्यालकाेटकी करूणा अाफ्नी बहिनी नमुनाकाे कापीमा शुकमानले जुनीमायालार्इ लेखेकाे चिठी भेटेर तनावमा अाएकी थिइन् । उता रश्मीकाे उपचारकाे लागि धामीकाेमा पुगेकी चन्द्रकलालार्इ धामीले अागनमा नागथान नबनाए ठूलै अनिष्ट हुने चेतावनी दिएका थिए ।
► ४० अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः गर्भवती बुहारी रश्मी एकाएक बिरामी परेपछि बगरपुरकी चन्द्रकलालार्इ निकै अापत परेकाे थियाे । घरकाे अार्थिक बाेझ कम गर्न अनेक उपाय साेच्दै गरेका डाँडागाउँका हेम्बेलार्इ उनकै बाल्यकालकी साथी उपाशनाले मध्यनगर अाएर काम सुरू गर्न हाैसला दिएकी थिइन् । स्यालकाेटमा खुट्टामा चाेट लागेर हजुरअामालार्इ मेडिकलमा लिएर अाएकी जुनीमाया हजुरअामालार्इ बाेक्ने मान्छेे नअाइदिएपछि छटपटाउँदै थिइन्।
► ३९ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः उता मध्यनगरमा भेटवालकी छाेरी निभाले भेटवालकाे इच्छा बिपरित नृत्य कक्षालार्इ निरन्तरता दिने अडान लिएकी थिइन् । यता बगरपूरमा भने श्रावण महिनामा मासु नखाने रश्मीकाे घरमा माइलादाइले मासु लिएर अाइदिएपछि चन्द्रकलालार्इ निकै तनाब भएकाे थियाे ।
► ३८ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः मध्यनगरकाे भेटवालकी छाेरी निभाले उनकी अामा अरूणीमानसँग बुबालार्इ नभन्ने शर्तमा अाफू चाँडै नै एउटा चलचित्रकाे नायीका बन्न लागेकाे कुरा सुनाएकी थिइन् । उता स्यालकाेटका शुकमानले अाफ्नाे बुबा पहलमानसँग जुनीमायाकाे हात माग्न जाने कुरा गरेका थिए ।
► ३७ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः शुकमानकाे एकाेहाेराे ब्यबहारले चिढिँएकी स्यालकाेटकी जुनीमायासँग उनकै हजुरअामा फूलमायाले शुकमानकाे खुब प्रशंसा गरेकी थिइन् । उता बगरपूरकी रश्मी र उनकी सासु चन्द्रकलाबीच मनमुटाव बढाउन निर्मलाले रश्मीले बाेका बेच्न खाेजेकाे कुरा सुनाइदिएकी थिइन् ।
► ३६ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः छाेरा अशाेकले पठाएकाे पैसा लिन गएकी बुहारी रश्मी अाफूलार्इ एक अाखर नसाेधी त्यही पैसाले सुनकाे सिक्री लगाएर अाएपछि बगरपूरकी चन्द्रकला अचम्मित भएकी थिइ्न् । डाँगागाउँका हेम्बे र उनकी श्रीमती रामप्यारी भरखरै फिल्म हेरेर फर्कदैथिए । त्यहीबेला बाटाेमै भेटिएकी हेम्बेकी बाल्यकालकी साथी उपाशनाले हेम्बेलार्इ अंगालाे मारेपछि रामप्यारी फन्केर हिँडेकी थिइन् ।
► ३५ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः जेठानीकाे ब्यबहारले दिक्क भएकी डाेल्माले श्रीमान सहदेवसँग हेम्बेकाे लागि ल्याएकाे गाेरू बेचिदिन कर गर्दा सहदेव रिसाएका थिए । रूक्मिणीसँग भेट्ने तरखर गरेकाे बेला श्रीमती बिरामी परेपछि तनावमा अाएका भेटवाललार्इ त्रिलाेचनले जिम्मेवारी म सम्हाल्छु भन्दै रूक्मिणीकाेमा जान उक्साएका थिए ।
► ३४ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः नयाँ परियाेजनाकाे गाेपनीयता भंग गरेकाे अाराेपमा कारवाही स्वरूप डाँडागाउँ जान लागेकी उपाशनाले अाफूमाथि लागेकाे झुटाे अाराेप मेटाउँनु नै अाफ्नाे मूख्य उदेश्य भएकाे बताएकी थिइन् । उता स्यालकाेटकी जुनीमायाले परीक्षाकाे बेला चीट चाेरेकाे कुरालार्इ लिएर उनकी अामा लाली निकै तनावमा अाएकी थिइन् ।
► ३३ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः गणितकाे परीक्षामा शुकमानले झ्यालबाट दिएकाे चीट सार्दा स्यालकाेटकी जुनीमायाकाे उत्तर पुस्तिका नै खाेसिएकाे थियाे । उता बगरपूरमा गर्भवती भएपछि पहिलाे पटक अस्पतालमा जचाउँन पुगेकी रश्मी पुरूष चिकित्सकले जचाउँने कुरा सुनेपछि अफ्ठ्याराेमा परेकी थिइन् ।
► ३२ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः गर्भवती बुहारी रश्मीलार्इ अस्पतालमा जचाउँन पठाउने कुरा गरेकी चन्द्रकलालार्इ उनकै छिमेकी निर्मलाले अस्पताल पठाउँदा जथाभावी अाैषधी दिएर बच्चाकै ज्यान जान सक्ने भन्दै त्रसित बनाउँन खाेजेकी थिइन् । डाँडागाउँका हेम्बेलार्इ उनका साथी रामेले अब त छाेरा नै हुन्छ हाेला भनेर जिस्काउँदा हेम्बे रामप्यारीले लट्टे झाँक्रीले फुकेर दिएकाे रक्ती उल्टी गरिदिएकाेले खै के पाे हुने हाे भन्दै चिन्तित देखिन्थे ।
► ३१ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः रामप्यारीले छाेरा जन्माउने विश्वासमा डाँडा गाउँकी जेठीअामाले त्रिशुल फाँटका लट्टे झाँक्रीले फुकेर दिएकाे रक्ती खुवाउँदा रामप्यारीले उल्टी गरिदिएकी थिइन् । उता मध्यनगरमा भेटवालकी छाेरी निभाले भेटवालकाे इच्छा बिपरित नृत्य कक्षालार्इ निरन्तरता दिने अडान लिएकी थिइन् ।
► ३० अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः भेटवाललार्इ उपासनाका प्रेमी प्रभातले अफिसमै अाएर तमासा गरेकाे कुरा त्रिलाेचनले सुनाइदिएपछि भेटवाल अाक्राेसमा अाएका थिए । उता गणीतमा कमजाेर भएकी स्यालकाेटकी जुनीमाया परीक्षा नजिक अाइरहेकै बेला गणीतकै कापी हराएर तनावमा अाएकी थिइन् ।
► २९ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः स्यालकाेटका शुकमान जुनीमायाकाे अाग्रहमा साेजनसँग फेरि मित्रता कायम गर्न मञ्जुर भएका थिए तर त्यसका लागि जुनीमायाले अाफ्नाे कुरा मान्रुपर्ने उनकाे शर्त थियाे । बगरपूरमा राेपाइ भइरहेकाे बेला खाजा खाने बेला भएर पनि रश्मी खाजा लिएर नअाइपुगेपछि उनकी सासु चन्द्रकला निकै अात्तिएकी थिइन् ।
► २८ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः अाफ्नै मामा ससुराले थाेरै पैसा माग्दा पनि छैन भनेर टारेकी रश्मीले गाउँकाे प्रमाेदलार्इ भने भएजति पैसा दिन तयार भएकी थिइन् । यता डाँडागाउँका हेम्बे र उनकी श्रीमती रामप्यारीबीच बाेलचाल नहुँदा हेम्बेले अाफै दाेस्राे पटक बाबु बन्दै गरेकाे कुरा डाेल्मा काकीकाे मुखबाट सुनेका थिए ।
► २७ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः भाका नाघेर पनि गाेरूकाे पैसा नतिरेकाे रीसमा जंगिदै अाएका ढकाल बाजेलार्इ, खेत जाेतिरहेका हेम्बेले गाेरू फुकाएर लैजाने भए लैजाउन भनेका थिए ।
► २६ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः उपाशनालार्इ उनकै सहकर्मी साथी र सिकले साेही अफिसका मेनेजर त्रिलाेचन नै उपाशनाकाे लागि सही च्वाइस हुन सक्ने भन्दै ठट्टा गरेका थिए ।
► २५ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः उपासनाकाे अनुहार अाफ्नाे भूपु प्रेमिकासँग मिल्ने भन्दै त्रिलाेचनले अब उपासनासँगकाे सहकार्यले नयाँ बाटाे लिन थालेकाे हाे कि भन्ने संकेत दिएका थिए ।
► २४ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः छाेरा नपाए हेम्बेकाे बिहेअरूसँग गरिदिने चेतावनी दिएकी थिइन् ।जुनीमाया र शुकमानकाे नाम लेखेर उनीहरू बीच प्रेम सम्बन्ध रहेकाे हल्ला चलाइएकाे थियाे ।
► २३ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः उपासना र उनका प्रेमी प्रभात बीचकाे खटपट झन बढेकाे थियाे । रश्मीले सासु चन्द्रकलासँग अामालार्इ देख्न मन लागेकाे भन्दै माइत जाने कुरा गरेकी थिइन् ।
► २२ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः मध्यपूरका भेटवाल बिरामी श्रीमतीकाे हेेरविचार गरिरहेका बेला रूक्मीणीकाे फाेन अाएपछि अफ्ठ्याराेमा परेका थिए ।
► २१ अाैं श्रृंखला सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः स्यालकोटकी जुनीमायालार्इ उनकै कक्षाकी साथी शान्तीले सोजनसँग लागेको अाराेप लगाएपछि जुनीमाया रीसले अागो भएकी थिइन् ।
१५ - पन्ध्राैं श्रृंखला
► सुन्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
श्रृंखलाको सार संक्षेपः रेडियो नाटक मै सरी सुनाखरीको अंक "१४" मा डाँडा गाउँका हेम्बे र उनकी श्रीमती खाेला पसेकाे खेतमा ढुंगा हटाउँदै गर्दा अचानक हेम्बेकाे हात ढुंगाले च्यापेकाे थियाे । यता मध्यपूरका भेटवाल छाेरी निभालार्इ लिएर उनले पढ्ने इन्स्टिच्यूट जान खाेज्दा निभाले,एक्कासी टाउकाे घुमाएकाे भन्दै सञ्चाे भएपछि अाफै जाने बताएकी थिइन् । उता बगरपूरकी रश्मी पनि केलाएकाे दाल बाेकेर भित्र जाँदै गर्दा लडेकी थिइन् । अब के हुन्छ त ? थाहा पाउनका लागि सुनाै अंक १५
१४ - चाैधाैं श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः रेडियो नाटक मै सरी सुनाखरीको अंक "१३" मा मध्यपूरमा स्वस्तिका कर्पाेरेशनकाे नयाँ परियाेजना लिड गर्न अवसर पाएकी उपासनाले प्रेमी प्रभातसँग भेटेर खुसी बाँड्दै अगाडि बढ्नकाे लागि साथ माग्न खाेज्दा प्रभातकाे कुराले उल्टै निरास भएकी थिइन् । उता स्यालकाेटकी जुनीमायालार्इ उनकी अामा लालीले अाप्पाकै लागि भएपनि अाफूले गरेकाे दुःख खेर नफाल्न बचन मागेकी थिइन् । यता डाँडागाउँका हेम्बे र जेठीअामा बीच पारिवारिक गन्थन भइरहेकाे बेला काेही हेम्बेकाे खेतमा खाेला पसेकाे खबर लिएर अाइपुगेका थिए । अब के हुन्छ त? थाहा पाउनका लागि सुनाैँ अंक १४
१३ - तेह्राैं श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः रेडियो नाटक मै सरी सुनाखरीको अंक "१२" मा स्यालकाेटकी जुनीमायाले साथी नमुनासँग अब पढाइमा ध्यान दिएरसबैलार्इ जित्ने कुरा गरेकी थिइन् । यता बगरपूरकी रश्मी भने विदेश फर्कन लागेका श्रीमान अशाेकसँग प्रेमिल रात बिताउँदै थिइन् । मध्यपूरमा भने स्वस्तिका कर्पाेरेशनका हाकिम भेटवालले नयाँ परियाेजना लिड गर्न उत्सुक त्रिलाेचनलार्इ परियाेजनाकाे जिम्मेवारीबाट अलग गराउने संकेत दिएका थिए । अब के हुन्छ त ? थाहा पाउनका लागि सुनाैँ अंक १३
१२ - बाह्राैं श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः
११ - एघाराैं श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः रेडियो नाटक मै सरी सुनाखरीको अंक "१०" मा डाँडा गाउँकी जेठीअामासँग छोरा हेम्बेले विदेश जान्छु भन्दा उनी केहीबोलिनन्। यता मध्यनगरमा क्लाइन्ट भेट्न स्क्वायर प्लाजा अाएका त्रिलोचन र उपासना अाफ्नै अफिसका हाकिमलार्इ कुनैयुवतीसँग देखेर छक्क परेका थिए । उता बगरपूरकी समिक्षाले रश्मी भाउजु गर्भवती भइन् कि भनेर चाँसो देखाएकी थिइन्। अब के हुन्छ त ? थाहा पाउनका लागि सुनाैँ अंक "११"
१० - दशाैं श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः रेडियाे नाटक मै सरी सुनाखरीकाे अंक "९" मा मध्यनगरमा स्वस्तिका कर्पाेरेशनका कर्मचारीलार्इ भेटवालले व्यवसाय राम्राेहुँदै गएकाे खुसीयालीमा ट्रिट दिएका थिए । ट्रिटका बेला रक्सीले मातेका त्रिलाेचनकाे व्यवहारसँग उपासना रूष्ट भएकीथिइन् ।उता स्यालकाेटका शुकमान अाफूले जुनीमायालार्इ दिएकाे जस्तै ब्रास्लेट करूणाकाे हातमा देखेपछि अाश्चर्यमा परेका थिए । यता डाँडा गाउँमा सहर जान लागेका काका सहदेवलार्इ बस स्टपसम्म पुराउन अाएका हेम्बेले केही कामका लागि भनेरसहदेवसँग पैसा सापटी मागेका थिए । अब के हुन्छ त? थाहा पाउनका लागि सुनाैँ अंक "१०"
०९ - नवाैं श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः स्यालकोटका शुकमानले जुनीमायासँग प्रेम प्रस्ताव राख्दै एउटा उपहार दिएका थिए । यता बगरपूरकी निर्मला काकीलेगाउँमा नराम्रो हल्ला सुनेको भन्दै समिक्षालार्इ अाशंकित बनाएकी थिइन् । उता मध्यनगरमा भने, भेटवालले अस्पतालमाअाफ्नी श्रीमतीलार्इ भेट्न अाएकी अफिसका स्टाफ उपासनालार्इ अब चाँडै नै एउटा महत्वपूर्ण कुराको घोषणा गर्ने खुलासागरेका थिए । अब के हुन्छ त, थाहा पाउनका लागि सुनाैँ अंक "९"
०८ - अाठाैं श्रृंखला
०७ - साताैं श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः मै सरी सुनाखरीको गएको अंक "६" मा बगरपूरकी निर्मलाले रश्मी अझै पनि गर्भवती नभएको विषयमा चाँसो देखाउँदैबिदेश गएका श्रीमान अशोकप्रति रश्मीलार्इ सशंकित बनाउँन खोज्दै थिइन् ।उता डाँडा गाउँकी जेठीअामा रिसाउँदा रिसाउँदै उनका छोरा हेम्बे अामाको अँखा छलेर काका सहदेवको खेत जोत्न पुगेकाथिए । र यता मध्यनगरमा भने, संस्था र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा त्रिलोचनसँग गाफिदै गरेका भेटवालले, साँझपख कतैजम्ने कुरा निस्कँदा बिरामी श्रीमतीको लागि डक्टरसँग भेट्नुपर्ने बाध्यता खुलाएका थिए । अब के हुन्छ त ? थाहा पाउनकालागि सुनो अंक "७"
०६ - छैठाैं श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः मै सरी सुनाखरीको अंक “५” मा देवर सहदेवसँग चिढिएकी जेठीआमा आफ्नो छोरा हेम्बे सहदेबकै खेत जोत्न जान लागेकोकुराले आक्रोशित थिइन् । उता जूनीमायाले करुणाको हातमा लेखेको नामको विषयमा जान्न खोज्दा करुणाले कुरालुकाएकी थिइन् । यता स्वस्तिका कर्पोरेशनका मेनेजर त्रिलोचनले भरखरै जागिरमा छनौट भएकी उपासनालाई प्रगतिको प्रलोभन देखाइ आफूलाई साथ दिनुपर्ने कुरा राखेका थिए । अब के हुन्छ त ?
०५ - पाँचाैं श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः ठूलो सपना बोकेर मध्यनगर अाएकी उपासनाले नयाँ जागीरको लागि अन्तरवार्ता दिएकी थिइन् । त्योजागीरसँग उनको जीवनका धेरै सपनाहरू गाँसिएका छन् । के अब उनीले जागीर पाउँछिन् त ? थप जान्नका लागिसुन्नुस् यो अंक ।
०४ - चाैथो श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः विदेशबाट फर्किएका अशोक र उनको श्रीमती रश्मीको सम्बन्धमा शंका उत्पन्न गराउने काम बलरामले गरे ।बलरामले रश्मीलाइ परपुरुषसँग हिंडिरहेको बताएपछि रिसाएका अशोकले के गर्लान् ? त्यस्तै जुनीमायालार्इ सुकमानलेस्कुलमा पछ्याएर हैरान छ । घरमा बसिरहेको बेलामा आइपुगेकी नमुनाले जुनिमायालार्इ एउटा गोप्य कुरा भन्नचाहेकी थिइन् । कतै सुकमानको बारेमा त हैन ? थाहा पाउनलाइ सुनौं यो भाग ।
०३ - तेश्रो श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः कतारबाट फर्केका अशोक सकुशल घर त आर्इपुगे तर आफुलार्इ मोवार्इल नल्यार्इ दिएको बहानामा उनकी श्रीमतीरश्मी रिसार्इन् र अशोकसंग बोलेकी छैनन् । रश्मीको यो ब्यवहारले अशोकलार्इ चस्का परेको छ । उसको मनमाशंका उब्जेको छ, आफु बिदेशमा हुँदा रश्मीको अरुसँग चक्कर पो चल्यो कि ! के अशोकको अनुमान ठिक होला त ? थाहा पाउन सुन्नुस्
०२ - दोश्रो श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः अघिल्लो अंकमा निकै खुशी भएर श्रीमती रामप्यारीलाइ उचालेर बोकिरहेका हेम्बेको कोठामा एक्कासी आमाआइपुगेकी थिइन् । आत्तिएका हेम्बेले श्रीमतीलाइ चटक्कै छाडिदए । उता बगरपुरको घरमा श्रीमती रश्मीले बिदेशबाटफर्किएका श्रीमान अशोकलाइ कुर्दै थिइन । तर अचानक बगरपुर आइरहेको बस पल्टेको खबरले रश्मी र उनकीसासुलाइ निकै चिन्तामा डुबाइदियो । अब के हुन्छ त ?
०१ - पहिलो श्रृंखला
श्रृंखलाको सार संक्षेपः यो अंकमा स्यालकोटकी जुनीमायाँ, बगरपुरकी रश्मी अनि डाँडागाउँको हेम्बेको कथा भनिएको छ । स्यालकोटकीजुनीमायाँको नायिका बन्ने सपनाको सुरुवात यसै अंकका साथमा हुन्छ । बगरपुरको रश्मी र उनको श्रीमान अशोकतीन बर्षपछि भेटिदैछन् । कतारबाट फर्किदै गरेका अशोकले के गुमाए ? के कमाए त कतारमा ?